﻿ ​चिया पिउनुहुन्छ ? होसियार ! यस्ता छन् चिया पिउनुका बेफाइदाहरु
ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित खोजले चिया धेरै पिउने व्यक्तिलाई क्यान्सरको सम्भावना हुने पत्ता लगाएको छ । अपोलो बिएसआर हस्पिटलकी चिफ डाइटिसियन स्विटी यादवले दिनमा तीनपटकभन्दा बढी चिया नपिउन सुझाब दिएकि छिन् ।
धेरै चिया पिउनुका यस्ता छन बेफाइदाहरु
चिया धेरै पिउने मान्छेलाई यो समाचारले दुखित बनाउन सक्छ । त्यो किनभने चियाले ब्रेस्ट क्यान्सरको सम्भावनालाई बढाउँदै लैजान्छ । बढी तातो चिया पिउनु पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ । किनभने तातो चिया पिउनाले मुख र पेट जोड्ने नली ड्यामेज हुन सक्छ । जसको कारण क्यान्सर नै हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । चियामा ‘फ्लोराइड’ नामक हानिकारक तत्वले शरिरको हड्डीलाई कमजोर बनाउँदछ ।
चियाको अत्यधिक प्रयोगले शरीरमा युरिनको मात्रा बढाउँदै लैजान्छ । जसको कारण सोडियम, पोटासियमजस्ता मिनरलसमेत शरीरबाट बाहिर निस्कन थाल्छ । जसले शरीरलाई कमजोर बनाउने काम गर्छ । चियामा भएको ‘टैनिक’ र टायलिन तत्वले शरीरमा ‘इनडाइजेसन’ बनाउन सक्छ र पेटको समस्या अझ बढ्दै जान्छ । चियामा भएको कफिनले मानिसमा थकान उत्पन्न गर्छ । थकित शरीरले मानिसलाई जाँगरसँग काम गर्नका लागि बाधा उत्पन्न गर्छ ।
चियाले बच्चामा यस्तो असर पार्दछ
चियामा भएको कफिनले मस्तिष्कको क्षमतामा कमि ल्याउँदछ । चियाका लागि चिनी अत्यावश्यक मानिन्छ । बढी चिनीले बच्चाको दाँतमा असर पार्ने गर्छ । चियाको अत्यधिक सेवनले शरीरमा क्याल्सियम मात्र घटाउँदै लैजान्छ । जसले शरिरको हड्डीलाई कमजोर बनाउने काम गर्दछ । चियाले बच्चाको शरीरमा ‘अनडाइजेसन’ गराउने भएकाले पेटमा समेत समस्या देखिन थाल्छ ।
कफीले पार्ने असरहरु
कफी कतिपय अवस्थामा सानको विषय पनि बन्ने गर्छ । वा भेटघाटलाई आत्मीय बनाउनका लागि पनि कफी पिउने प्रचलन छ । तर, एक अुसन्धानले कफीले किड्नीमा समेत असर पार्नेे देखाएको छ । पोर्चुगलस्थित सन्ट्रो हस्पिटलका डाक्टर लिस्बोआ नोर्टेले गरेको अनुसन्धानपछि निस्केको उक्त रिपोर्टलाई एक अन्तर्रा्ष्ट्रिय एएसएन किड्नी सप्ताहमा प्रदर्शन गरिएको थियो । उक्त अनुसन्धानबाट कफीले मधुमेहको समस्यालाई पनि बढाउने निष्कर्ष निस्केको छ ।
चिया तयार पार्दा चियापत्ती, दूध र चिनी कहिल्यै पनि एकैसाथ राख्नु हुँदैन । चियाका लागि पानी उम्लिसकेपछि मात्र चियापत्ती राख्नुपर्छ र अन्त्यमा दूध राख्नुपर्छ । चियाका लागि पानी पटक–पटक उमाल्नु हुँदैन । तीन मिनेटभन्दा लामो समय उमालेको पानीमा अक्सिजनको कमी हुन जान्छ । जसले चियाको स्वादमा कमि ल्याउँदछ । पानी नउम्ली चियापत्ती राख्नु हुँदैन । उम्लिसकेको पानीमा चियापत्ती राख्दा राम्रोसँग रङ आउँछ र फ्लेबरलाई अब्बल बनाउन पनि भूमिका खेल्छ । आधा घन्टाभन्दा लामो समय राखेको चिया कहिल्यै पनि पिउनु हुँदैन । किनभने लामो समयसम्म राखेको चियाले ‘इनडाइजेसन’ गराउँछ ।